Wasiirka Amaanka Puntland oo Safar Shaqo ku jooga Dalka Itoobiya+Sawiro – SBC
Wasiirka Amaanka Puntland oo Safar Shaqo ku jooga Dalka Itoobiya+Sawiro
Posted by Webmaster on April 21, 2013 Comments
Wasiirka wasaarada amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa safar shaqo ku maraya dalka ethiopia gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, waxaana wasiirku uu kulamo la yeeshay madax Sar sare oo ka tirsan dowlada ethiopia.
Wasiirku waxa uu Addis Ababa soo gaadhay 2-maalin ka hor waxaana uu soo dhoweyn wanaagsan ka helay Masuliyiin ka tirsan xukuumada ethiopia iyagoo garoonka dayuuradaha ee Bole International Air Port uga sii gudbiyay Hotel ka mid ah hotelada la dejiyo madaxda kala duwan ee africa iyo dalalka caalamka.
Waxa uu sidoo kale Dowladda Puntland uga qayb galay, kulan looga arrinsanayay arrimaha amaanka Kaasi oo lagu soo qaaday waxyaalo kala duwan, kualanka ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhaxal gal u ah Adkaynta amaanka dalalka geeska africa.
Wasiirku, ka hor Addis Ababa waxa uu ka soo kicitamay magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen Halkaas oo dhowaan lagu qabtay shirweyne caalami ah oo looga hadlaayay dagaal culus oo ka dhan ah Budhcad Badeeda iyo arga-gixisada.
Dhowaan magaalada Sanca ee xarunta dalka yemen waxaa isugu yimid dalal kala duwan kuwaas oo Ay taabattay saamaynta iyo dhibaatada ka dhalatay kooxaha budhcad badeedu ay u gaysteen Aduunyada oo dhan dalalkaas oo kala ahaa Yemen Djabouti,Maraykanka iyo Soomaaliya.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saaray ,sidii daagaal aan soo labasho lahayn loola gali lahaa
Alqaacidada gobolka iyo sidoo kale Burcadbadeeda, bacdamaa aysan joojin doonin dhibaatada ay Umadaha caalamka ku hayaan.
Shirkii Sanca Iyo Madaxda Somalia.
Shirka bacdamaa uu ahaa shir baaxad weyn waxaa kaalin lixaad leh ka qaatay madaxda dowlada dhexe ee somalia Iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulada kala duwan ee somalia ,waxayna siyaabo kala duwan u tilmaameen Sida loogu baahan yahay ka hor tag wanaagsan oo loo helo dhibaatada argagixasada iyo budhcad badeedu Ay ku hayaan somalia
Dowlada Federaalka ayaa waxaa shirkaasi qayb uga ahaa Wasiir-xigeenka Arimaha Dibada ,Wasiiru Dowlayaal ,Taliye-xigeenka Ciidanka Badda Somalia iyo sidoo kale Hay’adda Garsoorka waxaana ay madaxdaasi si mug weyn u Dalbadeen in dowladda dhexe ee somalia iyo maamulada kala duwan laga taageero sidii loo afjari lahaa Dhibaatooyinka Alqaacida Iyo Burcadbadeeda.
Shirka ayaa waxaa iyaguna qayb muhiih ka ahaa qaar ka tirsan maamulada kala duwan ee somalia sida Puntland,Somaliland Iyo Galmudug waxaana dhamaantood ay si wad ajir u ah isugu raaceen muhiimada Ay leedahay in garab buuxa laga siiyo somalia la dagaalanka Budhcada iyo Al-qaacida.
Shirkii Sanca Iyo Dowrka Puntland.
Dhanka maamulka Puntland waxaa uga qayb galay shirkaasi Wasiirka Wasaarada Gaadiidka Badda Iyo la Dagaalanka Budhcad Badeeda Puntland Eng.Siciid Maxamed Raage ,Wasiirka Amniga Puntland col.Khaliif Ciise Mudan iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Puntland.
Wasiirka Amniga Puntland oo iminka ku sugan magaalada Addis Ababa ,ayaa dhankiisa Ka waramay shirkaasi Waxaana uu sheegay in Puntland shirkaasi ay ka sheegtay dareenka murugada xanbarsan ee Al-qaacid iyo Budhcad badeeduba Ay ku abuureen dalal caalamka ka mid ah isla markaana ay Puntland diyaar u tahay Dagaalka quwada leh ee lagu qaadi doono
Al-qaacid iyo Budhcadda Badda.
“Shirkii ka dhacay Sanca waxa uu ahaa ,shir qayb ka ah la dagaalanka budhcad badeeda somalia iyo al-qaacida Runtiina waxa uu ahaa shir muhiim noo ah gaar ahaan Puntland, si wada jir ahna waxaa la isku raacay In aan laga hadhin sidii loo dabar goyn lahaa Budhcad badeeda iyo alqaacida” Sidaasi waxaa yidhi Wasiirka Amniga PL Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirku waxa uu sidoo kale tilmaamay qodobo dhowr ah oo la isku raacay mudadii shirku socday Muhiimada qodobadaasi la isku raacay ayaa wax weyn ka taraya hadii l afuliyo dagaalka la iclaamiyay Ee lagu qaadi doono Budhcad Badeeda Iyo Al-qaacida ,qodobada nuxurkooda ayaa kala ahaa
A- In Iskaadhi Laga Yeesho Budhcad Badeeda
Sidii Loo Dabar Goyn Lahaa.
B- In In La Xoojiyo Xarunta SANCA
Oo muhii u ah La Dagaalanka Al-qacida Iyo
C- In Puntland Laga Dhiso Xarun Kale
Oo Laga Hago Dagaalo Culus Oo Ku
Wajahan Budhcad Badeeda Iyo Al-qaacida
Bacdamaa Puntland Ay Ka Dhisan Tahay
Dhanka Ciidanka Khibradna u Leedahay
Qaabka Looa Qaadi Karo Dagaaladan Oo Kale.
Waxa uu tibaaxay wasiirku in dalalkii ka soo qayb galay shirkaasi oo maraykanku ugu muhiimsanaa ay si wada jir ah u Aqbaleen qodobada ka soo baxay shirkaasi iyadoo lagu ballamy in si dhakhso ah loo hirgaliyo mashruucan salka ku hayaDagaal lagu Qaado Budhcad Badeeda Iyo Al-Qaacida.
Wasiirka oo dhamaystay howlihii shaqo ee uu ku soo aaday dalalka Yemen iyo Ethiopia ayaa qorshaynaya inuu dib ugu laabto Caasimada Dowladda Puntland ee garoowe isagoo sii mari doona dalka jabuuti kuna hakan doono mudo kooban.
Zakariye Khaliif Faarax “Fantastic”